Ahoana ny fomba fananana fiovan'ny dizitaly amin'ny fifandraisana influencer | Martech Zone
Ny mpanjifanao dia mihalalina, mahazo hery, mitaky, mahay manavaka ary mora tohina. Ny paikady sy ny metrika taloha dia tsy mifanaraka intsony amin'ny fomba fandraisan'ny olona fanapahan-kevitra amin'ny tontolo nomerika sy mifandray ankehitriny.
Amin'ny fampiharana teknolojia ireo mpivarotra dia afaka miantra amin'ny fomba lehibe amin'ny fomba fijerin'ny marika ny dian'ny mpanjifa. Raha ny tena izy, 34% ny fanovana dizitaly dia tarihin'ny CMO raha ampitahaina amin'ny 19% ihany no notarihin'ny CTO sy ny CIO.
Ho an'ny mpivarotra dia tonga toy ny sabatra roa lela ity fiovana ity. Amin'ny alàlan'ny fampiasana fiovana dizitaly, CMO dia mety hisy fiatraikany amin'ny fotoana kely rehetra amin'ny dian'ny mpanjifa. Etsy ankilany, miaraka amin'i 70% ny andrana amin'ny fanovana amin'ny fikambanana tsy mahomby, ahoana no ahitan'ny mpivarotra fahombiazana amin'ny alàlan'ny mpivarotra fahombiazana?
Fampidirana ny Influence 2.0: Ny hoavin'ny marketing Influencer
Mba hanampiana anao hahita ny lalanao amin'ity tontolo mivoatra ity dia niara-niasa izahay TopRank Marketing ary Brian Solis, Mpanadihady Principal, Altimeter Group, hanadihady ireo mpivarotra mpanatanteraka amin'ny orinasa lehibe, ao anatin'izany ny American Express, 3M, Adobe, ary Microsoft. Ny iraka ataontsika? Mba hahitana ny fivoaran'ny fampiharana ny marketing influencer ary manome rafitra mampifandray ireo teboka eo amin'ny "marketing influencer" ankehitriny sy ny "fifandraisana amin'ny influencer" rahampitso.
Influence 2.0: Ny hoavin'ny marketing Influencer dia momba ny fahitana ny tontolon'ny fifandraisana influencer - fitsipi-pifehezana vaovao izay mihoatra ny varotra mifandraika amin'ny fifandraisana rehetra, natsangana teo ambonin'ny fototry ny fiaraha-miory sy mifantoka amin'ny mpanjifa. Ity fikarohana vaovao ity dia manome fanazavana momba ny paikady Influence 2.0, izay mampivondrona ireo vondrona tsy mitovy amin'ny fiatraikany amin'ny varotra, ny fahafaham-pon'ny mpanjifa ary ny fitazonana azy ireo.
Na dia mamporisika anao mafy aza aho downloado ny tatitra feno hahazoana ny fikarohana ilainao hitety ity faritra vaovao ity amin'ny fahatokisan-tena, omeko anao ny jery todika amin'ny fomba fijery telo lehibe ao anatin'ilay tatitra.
Ny tompona programa sy ny mpandray anjara amin'ny Influencer dia tsy mifandray
Ny iray amin'ireo fanamby lehibe misy fiantraikany amin'ny hoavin'ny marketing influencer dia ny famaritana azy matetika. Manakana ny fitaomana tsy hisarika ny sain'ny mpanatanteraka sy handray tombony amin'ny ezaka fanovana nomerika lehibe kokoa. Mandritra izany fotoana izany dia nianatra izahay fa ny fanovana dizitaly sy ny fifandraisana amin'ny influencer dia misy fiantraikany amin'ny lafin'ny asa rehetra.
Hitanay izany 70% ny programa influencer dia an'ny marketing, fa ny asa hafa, ao anatin'izany ny fangatahana gen, PR, vokatra ary haino aman-jery sosialy, dia mandray anjara mavitrika amin'ireo influencer ihany koa. 80% -n'ny mpivarotra no milaza fa telo na mihoatra Miasa amin'ny influencers ny departemanta, izay midika fa ny fananana hery miasa mangina dia tokony hananana asa hafa fa tsy ny tompona marketing mahazatra. Ny fitaomana dia mila andiana tompon-daka amin'ireo asa isan-karazany ireo mba hisarika ny sain'ny mpanatanteraka sy hiantraika amin'ny dian'ny mpanjifa isaky ny teboka ifandraisana.
Fifandraisan'ny influencer vokarin'ny fifehezana ny dia an'ny mpanjifa
Ny antsasaky ny (54%) ny mpivarotra ihany no nandrafitra ny dian'ny mpanjifa tao anatin'ny herintaona. Ny ankamaroan'ny orinasa mametaka ny dia dia mahazo fomba fijery stratejika sy mifototra amin'ny mpanjifa izay misy fiatraikany goavana mihoatra ny ekipa marketing. Ilaina ny saritany fitsangatsanganana mba hahazoan'ny orinasa hevi-baovao ary farany, tombony azo amin'ny fifaninanana.
Raha te-hameno ny fizotry ny saritany fitsangatsanganana ho an'ny mpanjifa ianao miaraka amin'ny sehatra Influencer Relation Management (IRM), dia ho fantatrao fa tsy ireo rehetra mitarika eo amin'ny sehatry ny asa aman-draharahanao fotsiny, fa koa hongaranao ny fomba isam-batan'olona mitaona ny dia ataon'ny mpanjifa. Brian Solis, Mpanadihady lehibe, Vondrona Altimeter
Ny fahitana hoe iza no mitaona ny mpanjifanao isaky ny dingana rehetra amin'ny dia ataon'ny mpanjifa dia afaka manampy anao hamantatra tsara ireo influencer izay mifanaraka indrindra amin'ny marikao. Ho fanampin'izany, ny fizotran'ny sarintany ho an'ny mpanjifa dia tsy azo ihodivirana fa mamoaka influencers vaovao izay misy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny dingana mitsikera. Ny fizotry ny sarintany ho an'ny mpanjifa dia hanosika voajanahary ireo mpivarotra handinika indray ny ezaky ny varotra influencer.
Ny fampitomboana ny teti-bola fampidirana dia manondro ny laharam-pahamehana amin'ny paikady
Ny fanatonana ny marketing amin'ny influencer toy ny mahazatra dia hahatonga anao tsy hanana fanaraha-maso ny marikao sy ny fahafaha-mifaninana amin'ny tontolo iray izay fehezin'ny mpanjifa. Fotoana izao hanaovana laharam-pahamehana ny fifandraisana amin'ny influencer. Ny mpitarika dia tokony hampifanaraka amin'ny fomba stratejika ny influencer amin'ny lafiny rehetra an'ny mpanjifa, saingy, tokony hampiasa vola amin'ny Fandrindrana fifandraisana eo amin'ny fifandraisana sehatra hazakazaka mahomby kokoa ary hanatsara ny fifamatorana maharitra.
55% an'ny mpivarotra antenaina hampiitatra ny teti-bolan'ny influencer. Anisan'ireo teti-bola ho an'ireo mpivarotra izay mampiasa teknolojia fatratra 77% mikasa handany bebe kokoa. Raha jerena ireo tabilao etsy ambany, dia nanjary haingana fa ny ankamaroan'ny teti-bola amin'ny marketing dia hampiitatra amin'ny volana ho avy.
Raha manao raharaham-barotra ianao dia ao amin'ny orinasa manan-kery. Ny fanovana dia manomboka amin'ny tsipika teti-bola iray foana, ka mila tompon-daka ao amin'ny fikambanana ianao hiteny hoe hanandrana an'ity izahay ary hijery izay hitranga. Philip Sheldrake, Mpiara-mitantana, Mpiara-miasa Euler
Fametrahana ny Foundation for Influence 2.0
Anjaranao izao. Amin'ny maha mpivarotra anao, ahoana no hanarahanao ny fanovana dizitaly haingana? Amin'ny fahalalana bebe kokoa momba ny fomba fanapahan-kevitry ny mpanjifa sy ny zavatra misy akony eo aminy. Raiso ny fahalalanao ny Influence 2.0 mihoatra ireo fikarohana telo lehibe ireo. Mba hahazoana dingana folo azo atao ary manomboka amin'ny fametrahana ny fototra ho an'ny Influence 2.0, sintomy Influence 2.0: Ny hoavin'ny marketing Influencer. Mianara bebe kokoa momba ny sari-tany, ny fanovana dizitaly ary ny fitaomana anio.
Tags: vondrona altimeterbrian solisMpanjanantanyFananarana 2Fananarana 2.0Influence 2.0: Ny hoavin'ny marketing Influencerhery miasa manginamarketing marketingtompona programa influencerFitantanana fifandraisana misy fiantraikanyIRMPhilip Sheldraketraackr